Shaati T-Shirt warshad mashiinka saxaafadda kuleylka iyo soo saarayaasha | Taile
Qalabkan qalcadda leh ee 38 * 38cm mashiinka saxaafadda kuleylka ayaa wareejin kara sawirrada, ereyada cudbiga, fiber, birta, dhoobada, galaaska iyo wixii la mid ah, oo ku habboon soo saarista hadiyad, xayeysiin iyo wixii la mid ah. Waxay awoodi kartaa inay ku dalbato wareejinta, waraaqaha, lambarrada iyo sawirrada funaanadaha, dharka, boorsooyinka, gogosha jiirka, halxiraalaha jigsaw, marmarka dhoobada, taarikada iyo waxyaabaha kale ee dusha sare ka muuqda. Ku siinta DIY hadiyado hal abuur leh oo loogu talagalay saaxiibtiis, hadiyado loogu talagalay ragga, saaxiibbada, carruurta, deriska, iyo qof kasta oo u dhexeeya, waa inaad ka fikirto waxa isagu ama iyadu jecel yahay. oo ka yaabin doonaan maalin weyn? Mise waxaad ka fekereysaa inaad ganacsi noocaas ah ka sameyso suuq weyn? 15 × 15 Sublimation Heat Press ayaa kaa caawin doonta.
请先 在 后台 设置 Lacag bixinta pal 账户 ， 然后 刷新 页面！
Xakamaynta saacadaha dijitaalka ah waa la hagaajin karaa illaa 999 ilbidhiqsi. Mashiinka saxaafadda kuleylka ayaa sidoo kale leh qiyaasta heerkulka dhijitaalka ah oo u dhexeeya 32-455 F. Haysashada badhanka "SET" in muddo ah ayaa beddeli kara Fahrenheit.and Celsius temparature gadaal iyo gadaal
Buug-gacmeedka furan iyo midka dhow waa fududahay in la shaqeeyo oo lagu hagaajin karo buro cadaadiska xagga dambe ee mashiinka. Awooddeeda warshadeed iyo adkeysigeedu waxay u oggolaaneysaa adeegsiga muddada-dheer, taasoo ka dhigeysa maalgashi weyn oo leh qiime aan caadi aheyn oo ka mid ah tartamayaasha.
3. SAXAAFADA KUleylka AWOODDA - 110 V 1200 W, wuxuu kululaa heerkulka si dhakhso leh iyo si siman 5 illaa 10 daqiiqo gudahood marka la shido, waxay kuxirantahay heerkulka aad dooratay. Usha kuleylka oo tayo sare leh, kuleylka kuleylka wax ku oolka ah.
4.Teflon dahaarka kuleylka leh iyo kuleylka diidaya silsiladda silikooniga ayaa ka dhigaya mashiinka daabacaadda funaanada ugu fiican, waxaa laguu xaqiijinayaa natiijo hagaagsan. Fadlan ha ka welwelin in dharkaaga lagu kicin karo khad. Khadku kaa daadan maayo markaad mashiinka wareejineyso. Iyada oo dahaarka Teflon dahaarka leh, looma baahna doono in la iibsado xaashiyaha Teflon mar dambe, lacag la badbaadiyo, dadaal la badbaadiyo.
5. BARNAAMIJKA kululaynta kululeeyaha ballaaran - wuxuu qaadaa 15 × 15 kuleylka, oo ah dhul ballaaran oo dusha sare ah si ay awood kuugu siiso inaad soo saarto wax soo saar ballaaran. Miisaanka Guud: 48.5 lbs, khafiifinta khafiifka ah ee kuleyliyaha aluminium wuxuu hubiyaa xitaa iyo cadaadis deggan.
6.MULTIFUNCTIONAL AND SASAL IN ISTICMAAL: Saxaafadda kuleylka waxaa loo isticmaali karaa funaanado, bacaha, gogosha jiirka, boorar, bustayaal, iwm. Hadiyad Kirismas ah oo si weyn loogu taliyay.
7.Full xakamaynta dijitaalka ah ee labadaas xudun. Heerkulka Heerkulka: 32 illaa 455 darajo F, Waqtiga Range 0 illaa 999 ilbidhiqsi, Waqti elektaroonik ah iyo xakameynta kuleylka, waqtiga saxda ah ee la dejiyay.
8.Fudud in lagu shaqeeyo furitaan iyo xirid adag oo gacan qabasho leh guga; Qalabka gacmeed ee Ergonomic wuxuu kordhiyaa raaxada iyo wax soo saarka;
9.Waqtiga dhijitaalka ah ee la arki karo & soo bandhigida heerkulku waxay noqon doontaa kaaliyaha guud inta lagu jiro shaqadaada.
15 * 15 inji
Hore: Mashiinka saxaafadda kuleylka ee Protale
Xiga: Cusub 5 mid ah 1 mashiinka saxaafadda kuleylka kuleylka ah
Mashiinka Saxaafadda ee Heat For T Shirts
Mashiinka Saxaafadda Shirt
Mashiinka Mashiinka Saxaafadda ee Shirt
Mashiinka Saxaafadda T Shirt